BWCDS010-16PD - OMG 16 Ports Body Worn Camera Docking Station misy Display | Vahaolana OMG
BWCDS010-16PD - OMG 16 Ports Body Worn Camera Docking Station misy aseho
Alefa ny rakitra
Fanitsiana ny fotoana
Fahafoanana mandeha ho azy
Fanangonana mandeha ho azy
Rafitra fikirakirana: Rafitra Winner Default, rafitra XP / Win7 / Win8
Rindrambaiko fitantanana Docking Station: Rafitra sy fitantanana ny data
Ny firafitra sy ny endrika: Ny famolavolana rindrina vita amin'ny rindrina, vy vita amin'ny vy, ny machining CsNC, ny gloss avo, ny fametrahana mofo, sns.
Efijery kasihina: 17.3-santimetatra XNUMX santimetatra
USB Interface: HUB indostrian'ny seranam-piaramanidina 16-port, fampahafantarana mahaleo tena, famatsiana herinaratra tsy miankina, seranan-tsambo tokana amin'izao fotoana izao 1.6A, ary interface tsara 2 * 2.0USB
LCD Screen: Efijery LCD 17.3-santimetatra
Audio: Realtek ALC887 nampidirina, kapila horonantsary 8 fantsona
ny famirapiratry ny mazava: 250cd / ㎡
fanapahan-kevitra: 1920 X 1080
Mifanohitra amin'izany kosa: 1000: 01: 00
Multi-asa: Tadiavo ny tamba-jotra Wifi, ny famoahana horonantsary HD HD ivelany manolotra fampisehoana lehibe
PCBA: PCBA mitambatra indostrialy
UNITÉ CENTRALE: Intel l3 3110 Dual-Core 2.4hz
Network Interface: Onboard Realtek RTL8111F Gigabit LAN
Fitetezana Hard Disk: Haavo fanaraha-maso, mahazatra 4T, 4 karama, fanampiana farany 40T, fanohanana ny fiasa disk (opsional)
Collection: Manohana fakan-tsary 16 namboarina ho an'ny fanangonana sy fiampangana miaraka
Fanangonana tahiry: Angonina ny tahiry dia alaina rehefa avy nampidirina ny fakantsary vatana. Raha ny filazan'ny polisy, ny laharan'ny fitaovana ary ny datin'ny fanangonam-bokatra, dia voatahiry ary apetraka amin'ny polisy ny marina.
Fandefasana data haingana dia haingana: 300M / min hafainganam-pandeha ambony, ny mpampiasa dia afaka mamolavola fakan-tsary tokana vita amin'ny vatana mba hampidirana rakitra. Na misy fakantsary maro mitafy vatana izay mampiditra data amin'ny fotoana iray ihany. Teknolojia fandefasana marobe maro hampiasa tsara ny fampandehanana ny serivisy docking.
Upload Upload File: Fampidinana laharam-pahamehana, afaka ataonao laharam-pahamehana ny fakantsary vita amin'ny vatana. Navoaka voalohany ny fakan-tsary, ary miandry fakantsary hafa.
Fomba fiasa: Capacitive mikasika sy fitendry sy totozy fanaraha-maso
Fitahirizana kapila: Mifamadika ho azy avy hatrany ny habaka fitahirizana, manohana ny fitahirizana kapila marobe, mifamadika ho azy avy hatrany amin'ny takelaka fitahirizana rehefa feno ny kapila iray
Famenonana haingana: Vita ny fanangonam-bokatra momba ny fakan-tsary amin'ny vatam-batana ary ny rafitry ny mpampiantrano dia manefa izany ho azy.
Fanadiovana angon-drakitra mandeha ho azy: Rehefa vita ny fanangonana angon-drakitra, dia esorina ny sary sy ny angon-drakitra ao anaty fakantsary vatana.
Fandefasana: Manohana ny fampitana ny takelaka. Ny fihemorana tsy nahy tamin'ny fakan-tsary amin'ny lozam-pifamoivoizana dia tsy misy fiantraikany amin'ny tsy fivadihana sy ny maha-tokana ireo angon-drakitra nafarana.
Hijery ny angon-drakitra: Manohana ny fijerena, kilalao, fanondranana ary hamafa ny angon-drakitra ao amin'ny biraon'ny dokambarotra
Fitaovana automatique Manohana ny fakan-tsary mandeha ho azy ny fakan-tsary mandeha ho azy amin'ny alàlan'ny efitrano fandraisam-bahiny sy ny fifanarahana miaraka amin'ny mpanam-potoana.
Fampitaovana ny rakitra: Manohana ny fahitana, filalaovana, fanondranana ary fitantanana feo sy horonan-tsary tadiavina miorina amin'ny safidy marobe toy ny anaran'ny polisy, ny ora ary ny karazana rakitra.
Fampiasa data manondrana: Ny mpampiasa dia afaka manondrana ny data ao amin'ny alalana amin'ny fitaovana fitehirizana manokana, ary ny data dia azo apetraka ampitaina amin'ny kapila U special special security.
Fiarovana fiarovana: Tsy misy dikany ny antontan-kevitra ao amin'ny mpizara na eo amin'ny toby fiantsonan-tsofina, tsy mampino ilay mpampiasa farany, izay tsy afaka miasa amin'ny data ivelan'ny rafitra.
Bokotra fanodinana: 1
Herin'aratra: Famatsiana herin'aratra 250W
Tontolo iainana: -10 ℃ ka -50 ℃
Sivana voatahiry: -20 ℃ ka -60 ℃
Modely famatsiana herinaratra: 110-220V AC
BWCDS010-16PD - OMG 16 Ports Body Worn Camera Docking Station misy aseho no farany niova: Aogositra 7th, 2020 by Admin